Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Meel Mariyey Taliyayaal Xilal Kala Duwan Loo Magacaabay – Radio Daljir
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Meel Mariyey Taliyayaal Xilal Kala Duwan Loo Magacaabay
Abriil 6, 2017 9:20 b 0
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa akhrin iyo dhegaysiga warbixin kooban kadib meel mariyey saraakiil kala duwan ee loo magacaabay qaar kamid ah talisyada ciidamada kala duwan ee Soomaaliya.
Hoos Ka AKHRISO Xilalka
Taliyaha Hay’ada sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo horay xilkan u soo qabtay.
Taliyaha guud ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya Jen, Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid.
Abbaanduuulaha ciidanka xoogga dalka Jen, Cabdullaahi Cali Caanood.
Dhanka kalena waxaa jira warar sheegaya in taliayaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed loo magacaabay Jen. Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid.
Maamulka Degmada Caluula oo Ka Hadlay Mashaariic Laga Hirgeliyey Degmadaasi (DHEGAYSO)